भगवानबाट उत्पन्न भएको बैकारिक अहंकारबाट हरेक बस्तुको रुप र अवस्था परिजर्तन हुन्छ । प्रकृतिबाट बिकृति आउनु भनेको रुप परिबर्तन हुनु हो र बिकृति ल्याउनुनै प्रकृतिको लक्षण हो । प्रकृतिमा पुरुषको अंश परेपछि बिकृतिको शुरुवात हुन्छ । यसरी अहंकार र प्रकृतिबाट सर्बप्रथम दश देवताको सृष्टी भयो । ती देवताहरु तत्वको रुपमा छन् ।
१. इच्छाशक्ती- सुसुप्त अवस्थामा रहेको जीबलाई स्फुरणठूलो पार्ने अबस्थामा ल्याउने कामलाई इच्छाशक्ती भनिन्छ । यो एक तत्व हो । इच्छाशक्तीको उत्पत्ती केबल भित्रि आत्माबाटै हुन्छ । यो तत्व भएकोले इच्छाशक्तीलाई देवता मानिएको छ ।
२. नीतिशक्ती- प्रकाशित तत्व वा बस्तुलाई नियमित रुपमा प्रयोग गर्ने वा संचालन गर्ने कि्रयालाई नीतिशक्ती भनिन्छ । बिना योजना कुनै पनि काम राम्रोसंग नबन्ने हँुदा नीतिशक्तीको हरेक क्षेत्रमा अति आवश्वकता छ । जीबीत प्राणीलाई संचालन गर्न भगवानले नीतिशक्तीको सृष्ठी गरेको हँुदा यो एक दैबिक तत्व हो र देवता नै मानिएको छ ।
३. काल- जगतको सृष्टी गर्न भगवानमा इच्छाशक्ती उत्पन्न भएको समयदेखि कालको गणना भएको छ । काल भनेको चलिरहेको समय हो । जसलाई बिपला पला घडि मुहुर्त प्रहर दिन हप्ता पक्ष महिना बर्ष युग आदिमा बिभाजित गरिएको छ । तत्व भएकोले काल पनि देवता मानिएको छ ।
४. दिशा- क्रनै पनि साकार बस्तुको लम्बाइ चौडाइ गहिराइ उचाइ दायु बायु अगाडि पछाडि आदिको अबस्थाको जानकारी गराउने तत्वलाई दिशा भनिन्छ । प्रत्येक पिण्डहरुको स्थान र आकार भगवानले नै गणना गरेकोले दिशा एक तत्व हो र देवता पनि मानिएको छ ।
५. गति- एक अबस्थाबाट अर्को अबस्थामा परिवर्तन गर्न प्रयोग गरिने शक्तिलाई गति भनिन्छ । प्रत्यक पिण्डको हिड्ने क्षमता तथा जीबहरुको चल्ने क्षमता भगवानबाटै प्राप्त भएकोले गति एक देवता मानिएको छ ।
६. पाचमहाभूत- पाँच वटा भौतिक तत्वहरुबाट बनेका बस्तुहरु निर्माण गर्न प्रयोग गरिने कि्रयाशक्तीलाई पाचमहाभूत भनिन्छ । भगवानले यसै तत्वबाट पृथ्बी आदि पिण्डहरुको उत्पत्ती गरेकोले पाचमहाभूत एक देवता हो ।
७. संख्या- पहिलो-दोश्रो एक-दुई आदि गणनालाई नै संख्या भनिन्छ । सृष्टी हुनुभन्दा पहिले निराकार अबस्थामा भगवान रहने हुँदा कुनै पनि संख्याको गणना थिएन । जुन समयबाट सृष्टी शुरु भयो त्यस बेलादेखि संख्याको उत्पत्ती भएको हो । जगतको उत्पत्ती संगै संख्याको पनि उत्पत्ती भएकोले संख्या एक देवता हो ।
८. जीब- अजर-अमर अबिनाशी अक्षरपुरुषलाई जीब भनिन्छ । भगवान नै जीबहरुको बीज भण्डार हो । भगवानको इच्छाशक्तीबाट प्रकृतिमा जीबको उत्पत्ती हुन्छ । जीब सुख दुःखको कर्ता नभई भोक्ता मात्र हुन्छ । यो अबिनाशी दैबिक तत्व हो र देवता पनि हो ।
९. स्वास्थ्य- जीबात्मा प्राणीहरुको साकार रुपशरीर अनुकुल अबस्थामा रहनु नै स्वास्थ्य हो । स्वास्थ्य बिना जीब जीबीत रहन सक्दैन । जीबलाई तन्दुरुस्त राख्ने काम स्वास्थ्यले नै गरेको हुन्छ । यो तत्व भगवानबाटै बिकृति भएर आएको हो । त्यसैले स्वास्थ्यलाई अश्बिनिकुमार देवता मानिएको छ ।
१०. मृत्यु- एक रुपबाट अर्को रुपमा वा एक अबस्थाबाट अर्को अबस्थामा परिबर्तन हुनुलाई मृत्युनाश भनिन्छ । जुन बस्तुको उत्पत्ती हुन्छ त्यसको नाश अवश्यम्भाबी छ । सृष्टी भएका सम्पूर्ण पदार्थको नाश हुनै पर्दछ । जन्म-मरणको चक्र चलाउन भगवानबाट सृष्टी कालमा नै मृत्युको उत्पत्ती भएको हो ।
बैकारिक अहंकारबाट उत्पन्न भएका यी दशवटै देवताहरुको सृष्टी भगवानले प्राणीहरुको रक्षाका लागि गरेको मान्नु पर्दछ ।